Ciidamo kawada tirsan dowladda Soomaaliya oo dagaal culus ku dhexmaray Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamo kawada tirsan dowladda Soomaaliya oo dagaal culus ku dhexmaray Muqdisho
Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka xasillinta magaalada Muqdisho iyo ciidamo kale oo ka tirsan militeriga Soomaaliya ayaa maanta dagaal culus ku dhexmaray suuqa weyn ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Dagaalkaan ayaa sida la sheegay yimid, kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee xasilinta Muqdisho ay isku dayeen inay hub ka dhigis ku sameeyaan labo askari oo ka tirsan ciidamada militeriga Soomaaliya oo xilligaasi ku sugnaa suuqa weyn ee degmada Wadajir.
Labadaasi askari ayaa la sheegayaa inay ka biyo diideen in hubka laga qaado, iyadoona markaasi kadib ay halkaasi ka bilaabatay israsaaseyn aad u xoogan.
Illaa iyo haatan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay rasaastaasi, balse waxaa xilligaasi kala carar ka bilawday suuq weyn ee degmada Wadajir.
Ciidanka ammaanka ee xasillinta magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay haatan gacanta ku haayaan qoriga mid ka mid ah labadii askari ee diiday in hub ka dhigis lagu sameeyo, halka midkii kalena uu baxsaday.
Dhawaan ayay ahayd markii golaha wasiiradda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay soo saareen go’aan ah inaan magaalada Muqdisho lagu dhex arki karin askari hubeysan oo aan ka tirsaneyn ciidamada ammaanka.
Sidoo kale, go’aanka kale ay golaha wasiirada soo saareen ayaa ahaa in mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee lagu illaaliyo magaalada Muqdisho aanay wadan karin in ka badan 4 askari iyo 4 qori oo AK-47 ah.